घटस्थापना दिन घट्यो सुनको चाँदीको भाउ, तोलाको कति ? – ईमेची डटकम
घटस्थापना दिन घट्यो सुनको चाँदीको भाउ, तोलाको कति ?
काठमाडौँ । आज (आइतबार) पनि सुनको भाउ ओरालो लागेको छ । गत बिहिबार ८ सय तथा शुक्रबार २ सय रुपैयाँ घटेको सुनको भाउ आज पनि ६ सय रुपैयाँ घटेको छ।
आज छापावाल सुन प्रतितोला ७० हजार २ सय तथा तेजावी सुन प्रतितोला ६९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला ७० हजार ८ सय तथा तेजावी सुन प्रतितोला ७० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
आज सुनको भाउसँगै चाँदीको भाउ पनि ओरालो लागेको छ । आज चाँदी प्रतितोला ८ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ। शुक्रबार हिजो चाँदी ८ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
सामान्यतया चाडबाडको समयमा सुनको कारोबार अरु समय भन्दा बढी हुने गरेको छ । बिवाहको सिजनमा र कार्तिकको धन्तेरसको दिन नेपालमा बढी सुनको कारोबारे हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
From KTV Dainik TV
ग्राहक भन्छन् व्यापारीलाई मात्रै फाइदा
सुनको मुल्यमा उकालो लागेसँगै सुनपसलमा पुरानो सुनका गरगहना बेच्न जाने मानिसहरुको भिड लाग्न थालेको छ । तर बेच्न जाने मानिसहरुको गुनासो छ ।
‘सुनको मूल्य बढ्यो भनेर के गर्नु, सुनको एक तोलाको गहना किन्दा ७५ हजार तिर्नुपर्छ। त्यही बिक्री गर्न जाँदा ६५ हजार पाउन मुस्किल हुन्छ।’ सुन बिक्री गर्ने दुब्लाउँदै जाने र किन्ने मोटाउँदै जाने अवस्था छ ।
केही ग्राहक भन्छन् ‘सुन किन्दा सुनको भाउमा किन्नु पर्छ बिक्री गर्दा गुन्दुकको जस्तै भाउमा ।
सुन बिक्री गर्दा कुल लागतको १५ प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुने गरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यको दाबी छ। ‘सुनका गहनाको प्रकृति हेरि बढीमा कुल लागतको १५ प्रतिशत नोक्सानी बिक्री गर्नेलाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुन बनाउँदा लाग्ने ज्याला र जर्ती पूरै जान्छ त्यसका अलावा सुन रिफाइनिङ गर्दा लाग्ने लागत १ देखि २ प्रतिशत काटिन्छ।’
एनएमसी चारआली कार्यालयको सेबा अब आफ्नै भवनबाट सुरु
अब मेचीनगरका सवै सहकारी संस्था दैनिक दुई घण्टा सञ्चालनमा आउने
गृहलक्ष्मी साकोसका सदस्यलाई ब्याजमा छुट, कर्मचारीलाई एक लाखको कोरोना बिमा
मेची उद्योग बाणिज्य संघको ‘घर–घरमा खाद्यन्न अभियानप्रति उपभोक्ता आकर्षित
गृहलक्ष्मी साकोसले सुरु गर्यो मोवाइल बैकिङ, कार्यालय हप्तामा दुइदिन खुल्ला
बौद्धमोड कृषि सहकारी हप्ताको दुईदिन खुल्ला